Mahombekombe akareba kwazvo muEurope uye Nyika | Kufamba Nhau
Maria Jose Roldan | | España, France, Beaches
Kana iwe uri mudiwa wemahombekombe, hazvidi kuti iwe uyambuke "puddle" kuti ugone kunakidzwa nemabhichi akanakisa pasirese, nekuti kuEurope isu tine mahombekombe akanaka akarebawo zvakareba.
Kana kuwedzera kumahombekombe iwe uchida kuona kuti haana magumo, saka haugone kupotsa mahombekombe akareba kwazvo muEurope nekuti pamwe kana iwe uchiziva izvo zvavari uye kuti ivo vari kupi ... iwe unozotanga kugadzirira rwendo kuenda kunzvimbo idzi.
1 Pakati penyika mbiri: France nePortugal
2 Mahombekombe akareba kwazvo pasi
2.1 Praia do Cassino, Rio Grande muBrazil
2.2 Cox Bazar Beach muBangladesh
2.3 Makumi mapfumbamwe Mile muNew Zealand
Pakati penyika mbiri: France nePortugal
Kune nyika mbiri dzinokwikwidza kukudzwa kwekuve nemhenderekedzo refu muEurope: France nePortugal. Hatisi kuzopinda mumatambudziko uye isu tichazvigumira pakuratidzira vaviri vakakwikwidza, makuru uye akakurudzirwa mahombekombe. Costa da Caparica, padyo neLisbon yaizova yekutanga uye yechipiri yaizove Las Landes, muFrench Aquitaine.
Costa da Caparica inzvimbo yakakura uye yakanaka yejecha ye anopfuura makiromita mazana maviri nemakumi maviri pakureba kumaodzanyemba kwemuromo weRwizi rweTagus (kana Tejo sekudaidzwa nePutukezi). Ino inzvimbo inozivikanwa apo vagari veko vanodirana muzhizha kuzuva uye kwazvinoitwa kuita mutambo wakakurumbira wemimhanzi. Hongu, vanhu vazhinji vanoenda kumahombekombe aya asi nekuda kwehukuru hwayo hazvigoneke kuiona kana hafu yakazara.
Kumucheto kwekumaodzanyemba kweCosta da Caparica ndiyo nzvimbo yeLagoa de Albufeira, nzvimbo yechisikigo muchimiro chegungwa uko kunogara marudzi mazhinji emiti nemhuka. Iyo yakanaka kwazvo! Kunze kwekunakidzwa nemabhichi anoyevedza, iwe unogona zvakare kufungisisa zvisikwa mukubwinya kwaro kwese. Pasina mubvunzo, inzvimbo yakanaka yekushandisa zororo rakakura, uye isu tinayo zvakare padyo neSpain! Hazvina basa kubata ndege uye kubhururuka maawa nemaawa ... Portugal ndiyo nyika yedu yepedyo uye ichi chikonzero chakakwana chekuishanyira.
Isu tinotora kusvetuka kwenzvimbo uye toenda kumahombekombe eAtlantic eFrance anobva kumuganhu weSpain kuchamhembe uye anosvika zana remakiromita. Ndiyo jecha pamhenderekedzo yeLandes uye inoumbwa nenhevedzano yemabhishi anoenderana anokanganiswa nemisha midiki yekuredza nenzvimbo dzine matombo. Pano pane musiyano uye gakava neCosta da Caparica, iri rinoenderera gungwa uye kwete seti yemahombekombe akabatana.
Iyi mahombekombe inonzi Côte d'Argent (Silver Coast) Iyo yakanaka kune avo vari kutsvaga nzvimbo yekuzorora pasina mhomho kana kuda kunakirwa nemasikirwo, asiwo kune vanoda mitambo yemvura yakadai sekusevha, kufefetera mhepo kana kitesurfing. Nharaunda (kana mahombekombe) yausingazokwanise kupedzisa kana kuenda zvachose.
Mahombekombe akareba kwazvo pasi
Zvinogoneka kuti mushure mekuona aya mahombekombe akaisvonaka uye nekuona kuti ndiwo akareba kupfuura mamwe ose muEurope, ikozvino iwe unoda kutora rimwe danho uye uone kuti ndedzipi dzinogona kuve dzakareba mhenderekedzo munyika. A) Hongu, Paunosangana navo, unogona kusarudza kuronga rumwe rwendo kuti uvashanyire uye udanane nemamwe mahombekombe mukuwedzera kune akareba muEurope.
Praia do Cassino, Rio Grande muBrazil
Pasina zvishoma kuti makiromita 254 kureba, iri mahombekombe riri muGuinness Book of Records seyakareba kupfuura mamwe esegungwa. Inotambanuka kubva kuguta reRío Grande kuenda kune iro raChuy pamuganhu neUruguay. Iyo inoshamisa gungwa inomhanya nemumataundi akati wandei uye icho chishamiso chevashanyi vanogara vachida kuenda vanofara kuti vaone refu kwazvo pamhenderekedzo. Uye tora kunyura!
Cox Bazar Beach muBangladesh
Kana iwe ukaronga kuenda kuBangladesh pazororo iwe haugone kupotsa rimwe gungwa rinoonekwa serimwe rehurefu mupasi risina chinhu chakaderera pane Makiromita mazana maviri nemakumi mana ejecha risina kumiswa. Inowanikwa kumaodzanyemba kweChittagong uye ine maBuddhist tembere munzira yayo.
Makumi mapfumbamwe Mile muNew Zealand
Kana iwe uchida kuenda kuNew Zealand haugone kupotsa gungwa iro rine zita raro rinokupa chiratidzo chekureba kwaro. Inodaidzwa kuti Makumi Mapfumbamwe mamaira nekuti uhu ndihwo hurefu hunopfuura nemumabhishi ayo, angave akaenzana nechakaderera Makiromita 140 emhenderekedzo yegungwa, asi makiromita makumi masere nemasere chete haana kumiswa. Iyo ine jecha rakanaka uye makwikwi ehove anoitwawo. Uye zvakare, uye kana izvo zvaive zvisina kukwana, unogona kuona ma dolphin, mawhale nezvimwe mhuka pakati pemvura yayo yakanaka.
Ichi ndicho chiwi chikuru pane jecha pasi rose saka zvinofanirwa kutarisirwa kuti zvine mahombekombe marefu. Inoyera pasingasviki 1630 km2 uye ine mahombekombe emakiromita zana nemakumi matanhatu. Icho chitsuwa chakakura zvakanyanya padanho revashanyi nekutenda kune kwayo yakajeka kristaro mvura uye gastronomy yenzvimbo.
Iri gungwa rinoshanya kwazvo zvakare nekuda kwaro Makiromita makumi mana nemana emahombekombe. Iine mvura isina kudzika yakadzika uye inozivikanwa nenzvimbo dzayo dzakanaka. Iri gungwa zvakare inzvimbo yakanaka yekuenda kunoona nzvimbo uye kunakirwa nemahombekombe akanaka akapoteredzwa nevanhu vakakura.
Sezvauri kuona, kune mahombekombe mazhinji aripo munyika ayo akareba chaizvo uye aunogona kushanyira uye kunakidzwa wakasununguka pese paunoda kutora rwendo kuenda kunzvimbo yekudenga. Zviri nyore sekutarisa mahombekombe pamepu, kutsvaga iyo yaunofarira kupfuura zvese uye tanga kugadzirira rwendo rwakakwana. Iwe uchafanirwa kunyorera ndege kana matikiti anodiwa, tsvaga hotera kana pekugara padyo kuitira kuti zvive nyore kuwana mahombekombe uye ugone kunakidzwa nezvose zvine nzvimbo yakasarudzwa yauinayo.
Ndeapi emahombekombe aya aunonyanya kufarira? Pane waunoziva here? Kana iwe uchida kuwedzera kumahombekombe kune urwu runyorwa kana kutaura pane maficha iwe aunofunga kuti akakosha kufunga kune vafambi venguva yemberi, inzwa wakasununguka kuzviita! Chokwadi nemipiro yako isu tese tinozozvipfumisa uye isu tinokwanisa kugona kuziva dzimwe nzvimbo dzine mahombekombe akanaka pasirese. Usamirira kwenguva yakareba kuti uronge zororo rako!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » España » Mahombekombe akareba kwazvo muEurope
Bora Bora, paradhiso inoshamisa muFrench Polynesia
Gulhi, iyo isina-frills Maldives